Miyuu Champions League mudnaanta koowaad u noqday Man City xilligan? Waxaa ka jawaabaya Pep Guardiola – Gool FM
Dajiye December 9, 2019
(Manchester) 09 Dis 2019. Liverpool ayaa awooday inay sii dheereysato hoggaanka Premier League sababa la xiriira guulaheeda isdaba jooga ah ay gaartay xilli ciyaareedkan, waxaana haatan uu noqday farqiga u dhexeeya iyaga iyo kooxda difaacaneysa horyaalka ee Man City ilaa iyo 14 dhibcood.
Macalinka reer Spain iyo kooxda Manchester City ee Pep Guardiola ayaa xaqiijiyay inuusan mudnaanta koowaad ka dhigan doonin tartanka Champions League, marka loo fiiriyo inay ku adkaan doonto u tartamida horyaalka Premier League xilli ciyaareedkan, kaddib guuldarradii ka soo gaartay kulankii lasoo dhaafay ee Manchester derby.
Haddaba Pep Guardiola ayaa la weydiiyay haddii uu wixii xilligan ka dambeeya mudnaanta koowaad ka dhigan doono tartanka Champions League wuxuuna yiri:
“Kuma fikireyno inaan ku guuleysano tartanka Champions League, balse waxaan isku dayeynaa inaan badino kulamada, si aan u guuleysano kulanka soo socda”.
“Kuma fikirayo tirada dhibcaha aan u baahanahay ama inta dhibco ay tahay inay khasaariyaan”.
“Awood uma lihin inaan joogteyno sidii aan aheyn labadii xilli ciyaareed ee lasoo dhaafay, sidaas darteed tani ayaa ah runta, waana inaad caawisaa ciyaartoyda”.